Antalaha: Nokihanin’ny Praiminisitra ny fitavozavozan’ny fandraisan’andraikitry ny manampahefana
Nidina tany Maroantsetra sy Antalaha ny delegasiona izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, omaly alahady 29 desambra 2019, nijery ireo fahavoazana vokatry ny orana nikija izay nateraky ny andro ratsy tany amin’ny faritra Avaratry ny Nosy, sady niara-nijery ny vahaolana niaraka tamin’ny tompon’andraikitra tany an-toerana avy.
Nanamafy ny tokony handraisin’ny tompon’andraikitra avy hatrany ny andraikitra tandrify azy ny Praiminisitra. « Tsy rariny loatra raha efa ho herinandro dia mbola miaina ao anatin’ny rano maloto ny mponina », hoy ity farany.
Fomba fiasa vaovao, hoy hatrany izy no tokony apetraka, raha tiana handroso ny Kaominina, ny Distrika, ny Faritra ary indrindra ny Firenena, dia ny fahaizan’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay efa nomena fahefana mandray andraikitra avy hatrany, fa tsy hiandry ny fitondrana foibe foana.
Hampiasa olona aman-jatony ny BNGRC, hanao asa tanamaro hanadio ny lakan-drano sy ny tanàna hanalana ireo mponina ao anaty rano maloto ao anatin’ny fotoana fohy. Nanambara ny Praiminisitra fa tokony ho tohizana ny ezaka mba hisorohana ny mety hiverenan’ny tondra-drano, ka nanaovany antso avo amin’ireo tompon’andraiki-panjakana hanentana ny mponina sy ireo mpandraharaha ao Antalaha mba hiara-hisalahy sy hifanome tanana amin’ny fanarenana sy ny fikojana ireo fotodrafitrasa.
Natory tao Antalaha ny delegasiona notarihin'ny Praiminisitra ary niazo an'i Sambava indray androany maraina.